၂၀၀၈ ခြေဥကိုပြင်ဖို့ နည်းလမ်းရှိသေးလား? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« စကာင်္ပူ မလေးရှားမှာနေတယ် အစားအစာရေမြေကိုသုံးစွဲတယ် ၊ အားပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ မြန်မာကိုအားပေးတယ်
ဝီရသူ မွတ်စလမ်ကိုမုန်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း »
၂၀၀၈ ခြေဥကိုပြင်ဖို့ နည်းလမ်းရှိသေးလား?
နိုင်ငံတော်သစ္စာကို စောင့်သိရိုသေကြမည့် သစ္စာဖောက်များ
၂၀၁၅ နီးလာလို့ပြန်နွှေးပေးပါ့မယ်၊ ရေးခဲ့ဖူးပေမယ့် မဖတ်ရသေးတဲ့ ရောင်ရင်းများ၊ သိချင်နေမယ့် မိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်၊ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အတွက် ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲ ထပ်ကာ၊ ထပ်ကာရေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဖိုင်မချိန်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမတင်ပဲ စေတနာသန့်သန့်နဲ့မအားတဲ့ကြားတဲ့က ပို့စ်တွေရအောင်တင်နေတာကိုအသိအမှတ်ပြုသောအားဖြင့် ကိုယ့်နီးစပ်ရာမိတ်ဆွေများကို တဆင့်ရှင်းလင်းပေးမယ်ဆိုရင် အားထုတ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ကချင်ဗိုလ်လောင်းတွေသေတဲ့သတင်းကြားရတယ်၊ ဗိုလ်လောင်းတွေရဲ့အသက်ဟာ ရိုးရိုးစစ်သည်တွေရဲ့အသက်ထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိမနေပါဘူး၊ ထို့အတူပါပဲ၊ မြန်မာစစ်တပ်က အရာရှိ၊ စစ်သည်တွေလည်းကျတာပါပဲ၊ တကယ်တမ်းကျဆုံးသွားတဲ့နှစ်ဘက်စစ်သည်တွေဟာ လူမျိုးရေးမှိုင်းကြောင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ မြင့်မြတ်သောအသက်စွန့်ခြင်းလို့ထင်ကြမှာပဲ၊ တကယ်တော့ ဘယ်သူသေသေ ရှက်စရာကောင်းတယ်၊ ကိုယ့်ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း သတ်နိုင်တာ ဂုဏ်ယူစရာမှ မဟုတ်ပဲ၊ ကချင်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဗမာဗိုလ်ချုပ်တွေ အချင်းချင်းပဲတိုက်ခိုင်းရမှာ။
အဲဒီနေရာမှာတစ်ခုနားလည်ထားဖို့က ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလည်းဆိုတော့ စစ်တပ်မှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောပါရစေ၊ ဘာကြောင့်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းသွားနေလို့ပါ။
မေးခွန်း (၁) မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေသလည်း။
စစ်တပ်ကပဲအုပ်ချုပ်နေပါတယ်၊ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ရယက၊ ခယက၊တယက စတဲ့ အဆင့်ဆင့်ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်မှုမှန်သမျှ ပြည်ထဲရေးက ကိုင်ပါတယ်။ အဲဒီပြည်ထဲရေးကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာ ကာ/ချုပ် (စစ်တပ်) ပါ။ (ပုဒ်မ ၂၃၂ ခ) ဒါကြောင့် စစ်တပ်ကပဲအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါ။
မေးခွန်း (၂) သမ္မတကြီးကပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့အမိန့်ပေးထားတာ ဘာလို့မရပ်တာလည်း။
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှကို အမိန့်ပေးကွပ်ကဲနေတဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနကို ကာ/ချူုပ်က စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမ္မတအမိန့်ပေးလည်း စစ်တပ်က ကာ/ချုပ်စကားပဲနားထောင်မှာပါ။ (ပုဒ်မ ၂၃၂ ခ)
မေးခွန်း(၃) ဒါဆိုတိုင်းပြည်မှာ အာဏာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလည်း။
ဒါကိုဖြေဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ဝန်ကြီးဋ္ဌာနတွေဟာအရေးအကြီးဆုံးလည်းဆိုတာသိရပါ့မယ်၊ အဲဒီဝန်ကြီးဋ္ဌာနတွေကိုချုပ်ကိုင်ထားသူသာအာဏာအရှိဆုံးပါ။ အဲဒီဝန်ကြီးဋ္ဌာနတွေကတော့
၃)နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး တို့ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီဋ္ဌာနကြီးတွေရဲ့ ၀န်ကြီးနဲ့ ဒုဝန်ကြီးတွေကို ကာ/ချုပ်က တိုက်ရိုက်ခန့်တာပါ၊ ဘယ်သူမှ ၀င်စွက်ဖက်လို့မရပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒီဋ္ဌာနကြီးတွေဟာ ကာ/ချုပ်စကားပဲနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာ/ချုပ်သာလျှင် အာဏာအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း(၄) အရေးအကြောင်းဆိုလျှင် စစ်တပ်နဲ့ရဲကိုသမ္မတက အမိန့်ပေးနိုင်ပါသလား၊
အမိန့်မပေးနိုင်ပါ၊ အရင် ကာ/လုံနဲ့တိုင်ပင်ရပါတယ်၊ ကာ/လုံက ကာ/ချုပ်အမိန့်ခံယူပြီးမှ လက်နက်ကိုင်အင်အားအသုံးပြုခွင့်ပေးမှာပါ၊ ကာ/လုံ တိုက်တွန်းလျှင်သမ္မတကြီးကအရေးပေါ်အခြေအနေကြော်ငြာပေးရမှာပါ။
မေးခွန်း(၅) စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းနိုင်လား၊
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းစရာမလိုပါ၊ သမ္မတက အရေးပေါ်အခြေအနေကြော်ငြာလိုက်တာနဲ့ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ကာ/ချုပ်ထံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (ပုဒ်မ ၄၁၈) အရ လွဲအပ်ရမှာပါ၊ အာဏာသိမ်းစရာမလိုပဲ သမ္မတကြီးဆက်သတဲ့အာဏာကို ဒူးနှန့်ယူရုံပေါ့။
မေးခွန်း(၆) စစ်တပ်က မြေသိမ်းတာတွေ၊ လယ်သိမ်းတာတွေ၊ မတရားမှုတွေလုပ်ခဲ့ရင် အဲဒီအတွက်အရပ်ဘက်တရားရုံးတွေမှာ တရားစွဲလို့ရနိုင်သလား။
လုံးဝမရပါ၊ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ပုဒ်မ ၁၀ ခ အရ တပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်သမျှ တပ်မတော်ကပဲ (လွတ်လပ်စွာ) စီမံမယ်လို့အတိအလင်းပြောထားပါတယ်။ ဥပမာ၊ ခင်ဗျားအခုပိုင်နေတဲ့မြေကို စစ်တပ်ကလာသိမ်းရင်ခင်ဗျားဘယ်ဥပဒေမှာအားမကိုးနိုင်ဘူး။
မေးခွန်း(၇) ဒါဆို ၂၀၀၈ ဥပဒေရဲ့ အားသာချက်ကဘာလည်း။
အားသာချက်တစ်ခုမှမရှိပါဘူး၊ အရင်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖြစ်နေတဲ့အတွက် အရပ်ဘက်ကို တစ်ချိန်ချိန်အာဏာပြန်အပ်ရမယ့်အမည်းစက်ကြီး ရှိနေတယ်၊ အဲဒီအမည်းစက်ကြီးကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်၂၀၀၈ ခြေဥအရ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာစွာစီမံထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း(၈) ဒါဆိုရင်တော့ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စအ၀၀အတွက် စစ်တပ်မှာပဲအပြည့်အ၀တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာရှင်းပါပြီ။ ပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစစ်အမှန်သမ္မတရရင်ရောပြေလည်နိုင်သလား။
မပြေလည်နိုင်ပါ။ ၂၀၀၈ ခြေဥ ရှိနေသမျှ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင်လာအုပ်ချုပ်လည်း စစ်တပ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပါ။
မေးခွန်း(၉) ဒါဆို ၂၀၀၈ခြေဥ ကိုပြင်မှရမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါပြီ။ ဘယ်လိုပြင်ရမလည်းဆိုတာသိပါရစေ။
အရင်ပုဒ်မ ၄၃၆ ကိုပြင်ရမယ်၊ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အတားအဆီးဖြစ်နေလို့ပါ။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၅%ကျော်သဘောတူပြီး တနိုင်ငံလုံးရဲ့ မဲပေးနိုင်တဲ့လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ထောက်ခံရဦးမယ်၊ ပြီးရင်တပ်မတော်ဘက်ကလည်းသဘောတူရမယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။ သူတို့ဘာသာသူတို့ အာဏာအပ်နှင်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဖို့ဆိုတာ ဘုရားအလောင်းတွေမှပဲ လုပ်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်လား။ ခင်ဗျားက ကာ/ချုပ်ကို ဘုရားလောင်းလို့တော့မထင်ပါဘူးနော်။
မေးခွန်း(၁၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလည်း
စစ်မှန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့ ပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့သမ္မတစစ်စစ်ဖြစ်လာရေးပါ၊
မေးခွန်း(၁၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်တွင်းအရေးအခင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာများပြီး ဝေဖန်တာ၊ ရှုတ်ချတာမျိုးအင်မတန်နည်းတာဘာကြောင့်လည်း။
မိုးစက်ကျတိုင်းလိုက်ခံနေမယ့်နေမယ့်အစား ခေါင်းမိုးကြီးတစ်ခုလုံးကိုလဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လက်ရှိအစိုးရဟာ ခေါင်မိုးနဲ့တူတဲ့ ၂၀၀၈ ခြေဥကို မပြင်နိုင်အောင် လူမျိူးရေးအဓိကရုဏ်း၊ ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေ၊ လယ်သိမ်းယာသိမ်းပြသနာအချို့ နဲ့ရေစက်တွေလိုက်ချပြီး လူစုတွေခွဲထုတ်နေပါတယ်။
မေးခွန်း(၁၃) အင်း၊ တော်တော်ခက်ခဲတာပဲ၊ ဒါဆိုရင် ၂၀၀၈ ခြေဥကိုပြင်ဖို့ တခြားနည်းလမ်းရှိသေးလား။
ရှိပါတယ်၊ ကာ/ချုပ် ကြီးကို ဘုရားဆုပန်အောင် တိုက်တွန်းတဲ့နည်းလမ်းပါ။
credit – မဟာမိုင်း
This entry was posted on December 2, 2014 at 11:17 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.